Sumurudka ugu weyn adduunka - Cusbooneysiin weyn 2021 - Video Cusub
Sumarka dunida ugu weyn
Sumurudka ugu weyn adduunka waa Inkalamu, sumurud Libaaxa laakiin Bahia Emerald ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay sumurud kii ugu weynaa ee abid la helo.
Waxay kuxirantahay hadii aan tixgalino dhismo ka kooban dhowr dhagax ama hal madarad oo keliya.
Sumurudkii ugu weynaa adduunka ee abid la helo
Sumarka ugu weyn adduunka waa Bahia Emerald: 1,700,000 carats
Bahia Emerald wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah walxaha halbeega ugu weyn ee abid la helo. Dhagaxan, oo culeyskiisu yahay 341 kg ama 1,700,000 carat, wuxuu ka yimid Bahia, Brazil waana kiristaalo ku duuban dhagaxa martida loo yahay. Waxay si dirqi ah uga badbaaday daadad intii lagu jiray Duufaantii Katrina ee 2005 xilli lagu jiray keyd bakhaarro ku yaal New Orleans.
Waxaa jiray muran la xiriira lahaanshaha ka dib markii la sheegay in laga xaday bishii Sebtember 2008 bakhaar ammaan ah oo ku yaal Koonfurta El Monte ee Gobolka Los Angeles, California. Jawharadku waa yaalay oo kiiska iyo lahaanshaha waa la xaliyay. Dhagaxa waxaa lagu qiimeeyay ilaa $ 400 milyan, laakiin qiimaha dhabta ah ma cadda.
180,000 carats sumurud ayaa dhowaan la soo saaray
Gem 180,000 carats jawharad ayaa dhowaan laga soo saaray macdan qodayaal ku dhex jira Carnaiba Mine ee ku taala Brazil. Muunadani sumurudkan cajiibka ah ayaa dhererkeedu yahay 4.3 fuudh waxaana lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 309 milyan.
Dhagaxa waxaa laga helay aag ka mid ah dalka Brazil oo loo yaqaan inay soo saaraan dhagaxyo aad u qurux badan, Macdanta Carnaiba ee ku taal gudaha gobolka Pernambuco. Kooxdan guntin ayaa laga helay 200 mitir qoto dheer oo ku jirta miinada waxayna u baahan tahay 10 qof usbuuc dhan si ay u soo saaraan oo ay kor ugu qaadaan kutlada dusha sare.
Muunadani waxay ka kooban tahay wadar ahaan 180,000 carat oo sumurud beryl ah. Marka la fiiriyo cabirka, dhif iyo tirada kiristaalo, khubaradu waxay qiyaaseen in muunad dhan ay qiimaheedu noqon karto $ 309 milyan.
Caalamka ugu weyn ee sumurud sameeyaa waa Inkalamu, sumurud Libaax: 5,655 carat
Sumurudkii ugu weynaa ee abid dunida soo mara, culeyskiisuna yahay 1.1kg, qiimihiisana lagu qiyaasay £ 2m, ayaa laga helay macdan laga qodo Zambia. 5,655 karat jawharad waxaa helay shirkadda macdanta ee Gemfields oo ku taal Kagem, oo ah macdanta ugu weyn ee sumcadda adduunka, Oktoobar 2, 2020.
Waxaa loogu magac daray Inkalamu, oo macnaheedu yahay libaax luuqada maxaliga ah ee Bemba. Gemfields wuxuu yidhi kaliya dhagaxa ugu yar uguna qaalisan ayaa magacyo la siiyaa. Magac Bemba ayaa loo xushay si loo sharfo shaqada ilaalinteeda shirkadda macdanta.
Emerald Unguentarium: 2,860 carats
Emerald Unguentarium, oo ah 2,860 ct (20.18 oz) oo ah weel sumurud ah oo lagu xardhay 1641, ayaa lagu soo bandhigayaa Khasnadda Imperial, Vienna, Austria.
Budhadhka Emerald ee Xurmada leh: 2,620 carats
Waxaa laga xardhay 3,600 ct oo Zambian sumurud ah 2006, taallada Buddha ee Xurmada leh waxay culeyskeedu yahay 2,620 ct.
Matalaada Siddhartha Gautama waa mid ka mid ah dhagaxyada waaweyn ee la xardhay ee adduunka. Waxaa lagu sawiray boos mudra oo caadi ahaan la xiriirta waaninta xubnaha qoyskiisa (sangha ama wadaadnimada) si loo joojiyo isqabqabsiga dhexdooda.
Miisaankeedu dhan yahay 2,620 karat, waxay leedahay midab cagaar qurux badan oo buluug ah (oo ay ugu wacan tahay nijaasta chromium iyo vanadium), aniga ahaan midabka ugu fiican ee sumurud, waana ka xaddidan tahay ka-mid-noqoshada.
Waa dhif iyo naadir in tayada noocaas ah ee qallafsan ay yeelato qaddar kale oo aan ahayn in lagu jaro gemooyin waji leh, markaa go'aanka ay shirkaddu qaadatay inay ku xardho wuxuu ahaa mid geesinimo leh. Waxaa xardhay oo qurxiyay nin farshaxan yaqaan jaad ah oo la yiraahdo Aung Nyein, asal ahaana ka soo jeeda Burma laakiin degan Thailand.
Guinness Emerald Crystal: 1,759 carats
Guinness Emerald Crystal ayaa laga helay macdanta sumurudda 'Coscuez emerald' waa mid ka mid ah muraayadaha ugu fiican ee sumurud wanaagsan ee adduunka, waana kan ugu weyn ee sumurud laga soo qaado ururinta muraayadda ay leedahay Banco Nacionale de la Republica ee Bogota, magaalada caasimadda ah Kolombiya.
Asalka magaca Guinness lama yaqaan, laakiin dhererka, 1759-carat, muraayad cagaaran oo dhalaalaya shaki la'aan wuxuu hayaa dhammaan cadeymaha lagu galayo buugga Guinness ee diiwaanka adduunka oo ah jawharad tayo sare leh oo qaali ah adduunka ugu yaraan sannadaha qaarkood illaa waxaa dhaafiyey kristantarro kale oo waaweyn oo sumurud ah.
The 1,686.3 carats LKA iyo 1,438 carats Stephenson emeralds
Dabeecadda dabeecadda si loo abuuro wax run ahaantii qalbi-joojiya weynaantiisa. The 1,686.3 carats LKA iyo 1,438 carats Stephenson emeralds oo la helay 1984 iyo 1969.
Si xushmad leh gudaha aagga Hiddenite ayaa ka mid ah dhagaxyada ugu caansan adduunka, laakiin dhakhaatiirta gemo-sharafta leh waxay tixgeliyaan labadan dhagax weyn, dabiiciga dabiiciga ah ee muraayad la yaab leh oo ka mid ah sumcadda ugu weyn ee abid laga helo adduunka: LKA iyo Stephenson.
A ballaaran, di-hexagonal crystal crystal oo ah 1,390 carats oo aan la jarin oo leh midab cagaaran oo qoto dheer oo qurux badan. Waa mid hufan oo ka kooban dhowr waxyaalood oo ka mid ah qaybta sare 2/3, waana mid tarjumeysa qaybta hoose. Waxay ku yaalliin Matxafka Mim, Beirut, Lubnaan.
Duke of Devonshire Emerald waa mid ka mid ah dhagxaanta waaweyn ee adduunka ugu caansan uguna caansan, culeyskiisuna yahay 1,383.93 carat. Asal ahaan macdanta oo ku taal Muzo, Colombia, waxaa hadiyad ama u iibiyey Emperor Pedro I ee reer Brazil William Cavendish, Duke 6aad ee Devonshire 1831. Waxaa lagu soo bandhigey Carwadii Weynayd ee London 1851, iyo tii ugu dambaysay ee Dabiiciga Matxafka Taariikhda ee 2007
Emerald Isabella: 964 carats
Isabella Emerald, oo ah 964 karat dhagax la jaray, waxaa iska leh shirkadda Ventures Archaeological Discovery Ventures, LLC.
Isabella Emerald waxay magaceeda ka heshay Boqoradda Isabella ee Boortaqiiska, boqoradda boqoradda ee King Charles V (1516 ilaa 1556), Emperor Roman Holy, Boqorka Spain, iyo Archduke of Austria, oo dhaxlay boqortooyo aad u ballaaran oo ku baahsan Yurub, Spain. iyo Nederland ilaa Austria iyo Boqortooyada Naples, iyo sidoo kale dhulalka dibada ee Isbaanishka Ameerika.
Boqoradda Isabella ayaa damacday dhalada oo ay damacday inay hanato, ka dib markay maqashay xisaabaadka dhalaalaya ee dhagaxa ka imanaya Hernan Cortez, warqad ay ugaga qortay Mexico. Jawharadkan oo loo yaqaan "sumurud Xukunka" qarsoodiga ah ayaa loo soo bandhigay Cortez, Montezuma II, Boqorka Boqortooyada Aztec, xilligaas Cortez wuxuu soo galay magaalada Tenochtitlan isaga iyo ciidamadiisii ​​Nofeembar 8, 1519. Hernan Cortez wuxuu u magacaabay dhagaxa oo lagu sharfayo Boqoradda Isabella, boqoradda boqoradda Charles V, Boqorka Barakaysan ee Roomaanka iyo Boqorka Isbaanishka.
Emerald Gachalá: 858 carats
Gachalá Emerald, oo ka mid ah sumcadda ugu qiimaha iyo sumcadda badan adduunka, ayaa laga helay sanadkii 1967, macdanta la yiraahdo Vega de San Juan, oo ku taal Gachala, oo ah magaalo ku taal Kolombiya, oo 142 km u jirta Bogota. Gachalá Chibcha macnaheedu waa "meesha Gacha." Maalmahan kristantu waxay ku taal Mareykanka, halkaas oo loogu deeqay Hay'adda Smithsonian Institution by dahablaha Magaalada New York, Harry Winston.
Sumarka Patricia: 632 carats
Patricia waa muunad weyn oo heer sare ah. Markay tahay 632 karat, dihexagonal, ama laba iyo toban dhinac, kareem waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah sumurudyada waaweyn ee adduunka. Waxaa laga helay Kolombiya sanadkii 1920, waxaa loogu magac daray gabadhii milkiilaha miinada.
Cilladaha ku yaal muraayaddan waa caadi laakiin waxay wax u dhimaysaa adkeysiga jawharad adag. Muunadani waa mid ka mid ah sumcado aad u tiro yar oo waaweyn oo la ilaaliyay oo aan la jarin. Maanta, Kolombiya wali waa isha ugu weyn adduunka ee sumurud.
Mogul Mughal Emerald: 217.80 carats
Mogul Mughal Emerald waa mid ka mid ah sumurudyadii ugu weynaa ee la yaqaan. Guriga xaraashka Christie ayaa ku tilmaamay inuu yahay:
Sumurud afar geesle ah oo looyaqaano The Mogul Mughal oo culeyskiisu yahay 217.80 carats, diidmada ayaa lagu xardhay baaqyada Shiicada ee qoraalka naskh ee xarrago leh, oo ku taariikhaysan 1107 hijriyada, gadaal ayaa lagu xardhay qurxinta caleenta ah, rosette-ka dhexe oo ay weheliyaan ubaxyo waaweyn oo waaweyn. oo leh sadar saddex ubax oo yaryar oo yaryar ah labada dhinacba, geesaha xardhan oo lagu xardhay jeexjeexyada qaabka iskutallaabta iyo qurxinta lafdhabarta, mid kasta oo ka mid ah afarta dhinac ayaa loo qoday isku-xidhka, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Asal ahaan waxaa laga qoday Kolombiya, waxaa lagu iibin jiray Hindiya, halkaas oo dhagxaanta ay aad u jeclaayeen taliyayaashii Boqortooyadii Mughal. Mogul Mughal waa mid gaar ah oo ka mid ah kareemada Mughal ee taariikhda leh - 1107 AH (1695-1696 AD) - taas oo ku dhex jirta xukunka Aurangzeb, oo ahaa boqorka lixaad. Si kastaba ha noqotee, taliyayaashii Mughal waxay ahaayeen Sunni, halka qoraalka, Salawat heterodox ah oo loo hibeeyay Xasan bin Cali iyo Xusayn bin Cali oo sidoo kale loo yaqaan Nad e Ali, ay tahay Shiico, taas oo ka dhigaysa inay u badan tahay inaysan iska lahayn Aurangzeb, laakiin mid ka mid ah maxkamadiisa ama saraakiishiisa.
Waxaa la iibiyey 27-kii Sebtember 2001-dii ee Christie loo siiyay £ 1,543,750, oo ay ku jiraan lacagta iibsadaha. Laga soo bilaabo 17kii Diseembar 2008, waxay ku jirtay gacanta Matxafka Farshaxanka Islaamka, Doha, Qatar.
Emeralds xusid mudan
Imbaraadoorkii Carolina: 64 karat
Karat-ka 64.82 carat Carolina wuxuu dhigayaa buuraha NC khariidada! Sumcadda caanka ah ee North Carolina Emerald ayaa la sheegay inay dhiirrigelisay gabal dahab ah oo la mid ah oo ay lahayd Catherine the Great.
Boqoraddu waxay leedahay qurux qurux badan oo laba geesle ah oo reer Colombia ah oo leh dheeman ku wareegsan sumurudka oo ku yaal xaraashka Christie oo ka badan $ 1.65 milyan. Carorolka Emperor, oo laga helay gudaha Hiddenite, NC, ayaa la iibsaday sanadkii hore waxaana hadda dhowaan loogu deeqay Matxafka Waqooyiga Carolina ee Sayniska Dabiiciga ee Raleigh, NC.
Qeybta ugu weyn ee waxaas oo dhan waa in deeq-bixiyuhu codsaday in la qariyo. Bandhigga madxafka ayaa la sheegay inuu leeyahay saddex kristantar oo aan la jarin. Dhagxaanta ugu weyn ee culeyskeedu yahay 1,225 carat waa midab cagaaran oo buluug ah oo la doonayo oo lala barbardhigi karo dhagaxyada aadka loo raadinayo ee Muzo.
Sumurudkii 'Saint-Louis sumurud' ee qurxiyay taajkii Boqortooyada Faransiiska waxay ka timaadaa macdanta Austria iyo sidoo kale badmaaxyadii hore ee Yurub. Miinooyinkaani waxay ahaayeen kuwo wax soo saar leh illaa qarnigii 19aad, ku dhowaad illaa laga helay Ural dhigaalkii 1830.
Sumurud Chalk: 37.82 carats
Taliyayaashii boqortooyada ee Gobolka Baroda, oo ah boqortooyo ka tirsan Hindiya, ayaa mar wada lahaa dhagaxa. Waxay ahayd xarunta dhexe ee sumurud iyo silsilad silsilad ah oo uu xidho Maharani Saheba, oo u sii dhiibtay wiilkeeda, Maharajah Cooch Behar.
Qarnigii 20aad, jawharad ayaa laga soo saaray culeyskeedii hore ee 38.40 carat (7.680 g) waxaana lagu dhigay giraan uu naqshadeeyay Harry Winston, Inc., halkaas oo ay ku hareeraysan tahay lixdan dheeman oo u eg pear u eg, wadar ahaanna ay tahay 15 carat.
Faraantiga waxaa ku deeqay Mr. iyo Mrs. O. Roy Chalk Matxafka Taariikhda Dabiiciga ee Smithsonian 1972 waana qayb ka mid ah Smithsonian-kaGurmadka Qaranka iyo Macdanta.
Emeralds aan la magacaabin
7,052 karat oo ah bilad aan la jarin oo ka timid Kolombiya, gaar loo leeyahay loona tixgeliyey inaan qiimo lahayn.
1,965 karat oo aan la jarin dhagax Ruush ah, oo lagu soo bandhigay Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee Gobolka Los Angeles.
Gawaarida 1,861.90-ct ah oo aan la jarin oo aan la magacaabin dhagax dhagax ah oo ka socda Hiddenite, NC, oo si gaar ah loo leeyahay. Waxaa la ogaaday 2003, kani hadda waa sumurudkii ugu weynaa ee laga yaqaan Waqooyiga Ameerika.
Shan kristal oo aan magacyadooda la shaacin oo ka yimid Muzo, Kolombiya, oo ku kaydsan keydka Bangiga Jamhuuriyadda Kolombiya, miisaankoodu waa 220 karat ilaa 1,796 karat.
Fred Leighton wuxuu iibiyey 430 karat oo lagu xardhay dhagax Mughal dhowr milyan oo doolar.
Is-ururinta al-Sabah ee laga helo Kuweyt waxay ku taalaa dhagax aad u qurux badan, oo ay ku jiraan 398 karat crystal oo qaab laba-geesood ah ah iyo 235 carats bead crystal.
Koob, dahab iyo dhaldhalaal qarnigii 17aad koob Mughal khamri ah 7 cm ayaa lagu iibiyay Christie's £ 1.79 million 2003.
Karat 161.20 oo la xardhay dhagax Mughal ayaa $ 1.09 milyan ka soo qaatay Christie's 1999.
Sumurud beenaadka adduunka ugu weyn
Dhagaxa cagaaran ee dhererkiisu yahay 11.5-kiilo garaam ayaa loo qoondeeyay sumurudka ugu weyn adduunka waxaana loogu magac daray Teodora, magacani wuxuu ka soo jeedaa Griigga oo macnihiisu yahay "hadiyad ka timid ilaah."
Si kastaba ha noqotee, dhagaxa qaaliga ah, si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inuusan aheyn $ 1-milyan oo lagu daray dhagaxa mulkiilaheeda la sheegay Regan Reaney inuu u dalacay sidii.
Mr. Reaney waxaa laga qabtay Janaayo 2012 gudaha Kelowna gudaha BC, maaddaama Booliska Canadian Canadian Mounted ay xabsiga u taxaabeen. Mr. Reaney waxaa lagu eedeeyay dambiyo badan oo khiyaano ah oo ka dhacay Ontario, RCMP ayaa ku sheegay bayaan kooban, Booliska Hamilton wuxuu haystay waaranno lagu soo xirayo.
Mudane Reaney horay uma uusan aqoon booliiska Kelowna, laakiin ma uusan dareemin dareenka ah inuu hoos u dhigo sumcaddiisa. Wuxuu lahaa jawharad qaali ah oo u eg qaraha si uu u iibiyo, intaas kadib.
Xaqiiqdii, waxay ahayd beryl dhab ah, laakiin waa la dhajiyay.
Sumurudka ugu weyn adduunka: FAQ
Waa imisa qiimaha sumurudka adduunka ugu weyn?
Jawharadkii ugu weynaa adduunka ee abid laga helo iyada oo lagu daboolay hal shard, Bahia Emerald ayaa culeyskiisu yahay qiyaastii 1.7 milyan carat, ama 752 lbs. Waxaa laga helay gobolka Bahia ee bariga Brazil. Dhagaxa weyn, oo hadda fadhiya qasnadda Los Angeles, wuxuu noqon karaa qiimahiisa $ 925 milyan.
Ayaa iska leh sumurudka ugu weyn adduunka?
Macaadintii ugu weyneyd ee abid laga helo dunida, culeyskeeduna yahay 1.1 Kg, qiimaheedana lagu qiyaasay £ 2m, ayaa laga helay macdan laga qodo Zambia. 5,655 carats jawharad waxaa helay shirkadda macdanta ee Gemfields oo ku taal Kagem, oo ah macdanta ugu weyn adduunka ee sumcadda, Oktoobar 2, 2020.
More macluumaadka gemological iyo emeralds iib ah dukaankayaga
Entry waxa loo posted in News iyo tagged sumurud ugu weyn, sumurud ugu weyn adduunka, sumurud ugu weyn, sumurudka ugu weyn adduunka, Caalamka sumurud ugu weyn.